Sihlaziya iSanDisk Connect Wireless Stick, i-USB engenantambo ye-Android ne-IOS | Izindaba zamagajethi
U-Xavi Carrasco | | Izesekeli, Izibuyekezo
Njengoba abaningi benu bazi futhi mhlawumbe behlushwa, kunenqwaba yabakhiqizi abakhetha ukungazihlomisi izingcingo zabo nge-micro SD slot slot, inkinga yangempela kubasebenzisi abavame ukuphatha inani elikhulu lamafayela wemultimedia, kungaba ngamavidiyo, izithombe noma umculo. Nge I-SanDisk Xhuma Okungenantambo Stick, kwakungakaze kube njalo fácil wandise umthamo wefoni yethu.
Le divayisi eyakhiwe yiSanDisk, isivumela ukuthi sijabulele zonke izinhlobo zokuqukethwe kwe-multimedia ngaphandle kwentambo ngohlelo lwayo itholakala kuzo zombili i-Android ne-iOS. ISanDisk yinkampani enamandla esekwe eCalifornia egxile ekwenzeni ama-Flash storage drives. Rkahle uthengiwe ngu I-Western Digital, umkhiqizi ama-hard drive omhlaba, enomlando omude embonini yezobuchwepheshe. Umkhiqizo weSanDisk owaziwa kakhulu ngenxa yekhwalithi yemikhiqizo yawo uzogcina igama lawo ngaphakathi kweWestern Digital Corporation.
1 Idizayini ebushelelezi nokwakhiwa okuqinile
2 Ukusebenzisa iSanDisk Connect Wireless Stick kulula kakhulu
3 I-SanDisk APP ilula kakhulu futhi inembile ukuyisebenzisa futhi inemisebenzi ewusizo kakhulu.
4 ISanDisk Connect Wireless Stick nayo iseyinduku ye-USB
5 Kufika kumadivayisi amathathu axhumeke ngasikhathi sinye
6 Ukuzimela kwale divayisi kungamahora we-4.5
7 Kutholakala ngosayizi abahlukahlukene, 16GB, 32GB, 64GB kanye no-128GB
Idizayini ebushelelezi nokwakhiwa okuqinile
Idivayisi kwakhiwe en I-polycarbonate emnyama iveza ubuhle nekhwalithi, ngaphambili kwayo singabona ukwakheka kwamaheksagoni ngokukhululeka okwakha ukwakheka kwekhiyubhu kuye ngokuthi ukukhanya kwehla kanjani, imininingwane enikeza ubuntu beyunithi, njengoba iSanDisk ijwayele kulayini womkhiqizo wayo, njenge ISanDisk Ultra USB. Kulokhu ngaphambili kuvela kwaholwa umhlophe yini azosinika yona impendulo cishe yiniá kwenzeka kudivayisi. Into ehlekisayo ngalokhu kuholeleka okumhlophe ukuthi ayicaci ngokuphelele uma i-Connect Wireless Stick icishiwe. Ngasohlangothini lwayo lwesokudla sithola el inkinobho ukuthungela, fáeyelashes ukucindezela y phenduka kunzimaeyelashes lokhu kwenzeka ngo iphutha. Ezansi emuva, singabeka iluphu, ukuyinamathisela okhiye bethu noma lapho isifanela kahle khona, isici sakudala sezinti eziningi ezivamile ze-USB iSanDisk ebifuna ukuzigcina kuyunithi yayo engenantambo.
Ngingathanda ukusho ngokukhethekile isembozo, ngoba sakhiwe izingxenye ezimbili, enye yazo, la Ingaphandle, es ipulasitiki tokusobala kwe- ukumelana okukhulu futhi enye, la Ingaphakathi, kunjalo wahlanganaáAmanga y iphrothenige Isixhumi sohlobo lwe-USB. Uma ulahlekelwa yileli khava cishe kungenxa yephutha lakho, ngoba lingena kahle kangangokuba akunakwenzeka ukuthi liwe.
Izinyathelo i-del I-SanDisk Xhuma Okungenantambo Stick wakhe Ububanzi be-191mm, ubude obungu-762mm y 95mm ubukhulu. Okuthile okukhudlwana kunama-pendrives ajwayelekile esingawathola manje emakethe, kepha uma kubhekwa ukuthi kufaka phakathi ibhethri, i-antenna kanye nesilawuli se-Wifi ngaphansi koshisisi waso, kuyinto efanele ukuthi iqhubeke nokuphathwa kangako. Kuthinta nakwisisindo ungatshela ukuthi umuzwa muhle, futhi que uzizwa enzima.
Ukusebenzisa iSanDisk Connect Wireless Stick kulula kakhulu
Impahla eyinhloko yeSanDisk Connect Wireless Stick ngokungangabazeki ukuxhumana kwayo okungenantambo okuhambisana ne-iOS ne-Android nge-APP ethize, futhi njengoba sishilo ngenhla ukusebenzisa idivayisi kulula kakhuluKumele sicindezele inkinobho yamandla ohlangothini nasekutholeni kwetheminali yethu noma ithebhulethi bese sixhuma kunethiwekhi ye-Wifi enikezwa yi-Wireless Stick. Ngokusobala i-posteriori singashintsha i-SSID (igama lenethiwekhi) bese unikeza iphasiwedi ukuze kube ngubani kuphela esifuna ukuxhumana naye.
I-SanDisk APP ilula kakhulu futhi inembile ukuyisebenzisa futhi inemisebenzi ewusizo kakhulu.
Uma sesixhumekile, singafinyelela okuqukethwe ngeSanDisk APP, lokhu kucaciselwe ibanga le-Wireless Connect. Pngenhlanhla ilula kakhulu futhi inembile ukuyisebenzisa. Kumenyu yokufaka isicelo sizothola izici ezilula kakhulu, njengokuxhuma iSanDisk Connect Wireless Stick kunethiwekhi yasendaweni yeWifi, ezosivumela ukuthi sihlale sixhunywe kudivayisi ngasikhathi sinye asilahli la ukuxhumana kiminternet de u-W wethuuma. Esinye isici esaziswa kakhulu ngabasebenzisi abanikeza ikhamera yabo ye-smartphone okuningi kwe-trot ukwenza ifayela le- isipele se- vui-estra igalari yesithombe, ilungele ukudlulisa izithombe kwikhompyutha futhi isebenze nazo noma yenze izipele kalula.
ISanDisk Connect Wireless Stick nayo iseyinduku ye-USB
Iphuzu elilodwa esivuna ukuthi idrayivu yale drive yeSanDisk Connect iseyipendrive ye-USB 3.0, nayo singayixhuma kwikhompyutha futhi silayishe amafayela ngokunethezeka ukuwasusa lapha aye laphaya noma ukuwajabulela kusuka ku-smartphone yethu.
Kufika kumadivayisi amathathu axhumeke ngasikhathi sinye
Le yindlela elula yokuba nayo iseva encane ukwaba zonke izinhlobo zamafayela endaweni. Kuze kube manje, isamba esikhulu sokusebenza namathuba wokuxhuma asinikeza ukwanda okukhulu komkhiqizo womhlaba wobungcweti nowomuntu siqu.
Ukuzimela kwale divayisi kungamahora we-4.5
Ezimweni zayo ezinhle kakhulu, lapho kunedivayisi eyodwa exhunyiwe sizoba namahora angu-4.5 wokusetshenziswa okuqhubekayo, empeleni lokhu hhayi iphuzu lakhe eliqinile, kepha ezingeni lokuthengiselana okukodwa okukodwa, ukufinyelela kwefayela amahora amane nohhafu yisikhathi eside, futhi isinikeza ithuba lokubuka yonke i-movie ngaphandle kokukhathazeka.
Ukushaja kuyashesha emahoreni amabili sinayo iyunithi ku-2% futhi-ke singayixhuma esokeni noma ebhankini yamandla ukunweba amahora wokusebenzisa kakhulu njengoba sidinga.
Kutholakala ngosayizi abahlukahlukene, 16GB, 32GB, 64GB kanye no-128GB
ISanDisk Connect Wirless Stick iyatholakala ngamakhono ahlukahlukene ngamanani aphansi uma inikezwa imininingwane namandla ayo. 16GB ngo- € 30, 32GB ngo- € 40, 64GB por 50 € futhi 128GB ngo- € 80.
Idizayini enhle nokumelana
Isebenziseka futhi isebenziseka ngezindlela eziningi
I-SanDisk Xhuma I-Wireless Stick
Ukubuyekezwa kwe: U-Xavi Carrasco
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Izesekeli » Sihlaziya iSanDisk Connect Wireless Stick, i-USB engenantambo ye-Android ne-IOS